Al-Shabaab oo fariin hanjabaad ah u dirtay dowladda Mareykanka - Awdinle Online
Al-Shabaab oo fariin hanjabaad ah u dirtay dowladda Mareykanka
January 12, 2020 (Awdinle Online) –Hoggaanka kooxda Al-Shabaab ayaa ku hanjabay inay sare u qaadayaan weerarada ka dhanka ah Mareykanka, kadib midkii ay dhowaan ku qaadeen saldhigga Manda Bay oo ku yaalla gobolka xeebta Laamu ee dalka Kenya.
Idaacadda Andaluus ayaa baahisay qeybta koowaad barnaamij ay ku sheegtay inay uga hadleyso duulaamada ka dhanka ah Mareykanka.
Al-Shabaab ayaa sheegtay in weeraradooda ay yihiin kuwa ay ugu jawaabayaan howlgallada Mareykanka uu ka wado dalalka Ciraaq iyo Afghanistan illaa bariga Africa, kuwaas oo ay sheegtay in lagu dhibaateeyo inta badan dadka musmiliinta ah.
Sidoo kale waxa ay ku hanjabtay in hadda kadib ay beegsan doonto ciidamada Mareykanka, kuna weerari doonto xarumahooda.
Weerarkii ugu dambeeyey ee ka dhacay saldhigga Manda Bay ayaa waxaa ciidamada Mareykanka ka soo gaaray khasaare xoog leh oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac
Horay kooxda Al-Shababa ayaa sidoo kale u weerartay saldhigga Balidoogle oo muhiim u ah Mareykanka, inkastoo weerarkaasi ciidamadu ay ka hortageen.
Mareykanka ayaa ka mid ah dalalka la dagaalama Al-Shabaab, waxaana uu duqeymo xoogan ka fuliyaa koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya.
Previous articleJeneral Xaftar Oo Aqbalay Xabbad Joojin
Next articleDowladda UK oo digniin amni ka soo saartay dalalka Kenya iyo Soomaaliya